Friday 21st of January 2022 / 02:32:05 PM
अनलाइन दर्पण 2021-05-05
काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक मालिको स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो देशकी एक जना २५ वर्षीया महिलाले एकै पटकमा नौ जना बच्चालाई जन्म दिएको बताएको छ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मालीकी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्री डाक्टर फान्ता सिबेले मो
काठमाडौं । बिहेको समयमा हरेक मानिसको चाहना हुन्छ कि आफ्नो पार्टनर असल होस् र ऊसँग हाँसीखुसी जिवन बिताउन सकियोस् ।
तर अमेरिकामा एकजना महिलाले सही जीवनसाथीको खोजीमा अहिलेसम्म १० पटक बिहे गरिसकेकी छिन् ।
आफूले यति धेरै पटक बिहे गर
अनलाइन दर्पण 2020-02-07
दक्षिण भारतको केरला राज्यको एउटा आवासीय भवनमा बस्ने मानिस धाराहरूबाट बियर, ब्र्यान्डी र रम मिसिएको तरल पदार्थ बग्न थालेपछि अचम्भित भएका छन्।
सोमवार बिहान उनीहरूको भान्सामा धाराबाट अचानक मदिराको गन्ध आउने खैरो झोल बग्न थालेको थियो।
काठमाडौँ- झट्ट सुन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । तर मानिसहरु चर्चा बटुल्न अनेक फण्डा अपनाउने गरेका छन् । यस्तै हर्कतका कारण एक युवती सामाजिक सन्जालमा अहिले चर्चामा रहेकी छिन् ।
उनले आफ्नो तस्वीर इन्टरनेटमा राख्दै लेखेकी छिन्– &
ज्योतिषमा कूल १२ राशी हुन्छन् । सबै राशीका महिला पुरुषको फरक फरक विशेषता हुन्छन् । यीमध्ये तीन राशीका महिलाहरु अन्य राशीका महिलाभन्दा धेरै आकर्षक हुने मानिन्छ । ज्योतिषाचार्य पण्डित मनीष शर्माका अनुसार यी तीन राशीका महिलाको राशीस्वभाव अन्य राशीका
१२ अंकलाई धेरैले अशुभ मान्दछन् । कसैलाई दशा लाग्दा वा आपत पर्दा मेरो त बाह्र बज्यो भन्छन् धेरै मान्छेहरु । बाह्र बजेको समय पनि धेरैले अशुभ काल ठान्छन् र कतै यात्रा गर्दा बाह्र बजेको समय छल्ने गर्दछन् । तर जति छले पनि एक दिन अर्थात् २४ घण्टामा २ पट
पंजाबको निजी स्कुलमा ८ कक्षामा पढ्ने किशोरी लगातार दुब्लाउँदै गएकी थिइन् । छोरीको हालत देखेर आमाले उनलाई अस्पताल लिएर गइन् । अस्पतालमा डाक्टरले उनको जाँच गरेपछि आमालाई रिपोर्ट दिँदै छोरी एचआइभी संक्रमित भएको बताएपछि आमा बेहोस भइन्।
नेपालमा यस्तो पनि गाउँ छ । जहाँ युवतीहरुले केटा नपाउँदा वैवाहिक सम्बन्ध राख्न पाएका छैनन् । सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने यो खबर गोरखाका विकट गाउँहरुको हो ।बिही ६, न्याककी कान्छी गुरुङ २९ वर्ष पुगिन् । न घरमा बिहे गर्ने कुरा गर्छन् न कसैले उनलाई बिहे गर
प्राकृतिक रुपले महिला गर्भवती हुनका लागि उनले पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध गरेकै हुनुपर्छ । तर अमेरिकाको फ्लोरिडामा एउटा यस्तो घटना भएको छ । जसले उल्लेखित मान्यतालाई चुनौति दिएको छ । त्यहाँ एक पौडी पोखरीमा नुहाएसँगै १६ जना किशोरीहरु गर्भवती भएका छन् ।
काठमाडौं । ‘मेनु पल्टाई–पल्टाई हेर्याे, लास्टा रोज्ने मःम’ याे भनाइ पछिल्लाे समय निकै प्रचलित छ । अफिस होस् वा स्कुल–कलेज चमेना गृह, सबैतिर मःमःकै पारखीको भीड लाग्छ । सामान्य खाजा पसलमा पनि मःम नै रोजाइमा पर्छ । यो अधि
बाँदरमाथि युवतीले गरिन यस्ताे लाजमर्दो हर्कत, ९० सेकेण्डको भिडियो बन्यो भाइरल !
महिलामाथि यौन दुर्व्यवहार, बलात्का*र भएका घटना त हामीकहाँ निकै धेरै आउँछन्। तर अफ्रिकी मुलुक इजिप्टमा एक युवतीले बाँदरमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। यौ*न दुर्व्यवहारको अभियोगमा ती २५ वर्षीया युवतीलाई ३ वर्ष जेल सजाय दिइएको छ।
श्रीमानसंग लुकेरै जन्माईन् ३ बच्चा, श्रीमानले खोज्दै छन् छोराछोरीका बुवा !
पाेखरा जब आफूले जन्माएका बच्चाहरुको बुवा नभएको बताइएपछि अचम्म मान्नु स्वभाविक नै हो ।
यस कारण त्यतिबेला सबैको कुडिन्छ, रिस उठ्छ । यो बिषय ब्रिटेनको हो । ती व्यक्ति सफल व्यवसायी हुन् । ती मानिस अहिले तीन बच्चाको बुवा हुन् । जसमा दुई बच्चा
अण्डा पहिला कि कुखुरा पहिला……
अनलाइन दर्पण 2019-07-27
कुखुरी पहिला आयो कि अण्डा ? यो प्रश्न मानिसहरुबिच जहिले पनि विवादमा रहेको थियो । तर, यसको ठोस उत्तर भने कोहीसँग पनि रहेको थिएन । तर, अब वैज्ञानिकहरुले दाबी गर्दै भनेका छन्,‘संसारमा कुखुरी नै पहिला आएको थियो ।’ब्रिटेनका वैज्ञानिकहरुले य
चक्कु किन्दा बसेको माया विहेमा बद्लियो, उमेर अन्तर थाहा पाउँदा सबैको होस उड्यो
काठमाडौं । विवह एक सत्य हो यो सायद धेरैले गर्छन पनि । पछिल्लो समय एक जोडीको बिहे निकै चर्चामा छ । मायामा उमेर हेरिँदैन भन्ने उखान चरितार्थ गर्ने यो बिहे ६२ वर्षका बृद्ध र १८ वर्षकी युवतीबीच भएको हो । इण्डोनेसियाको गोवामा बस्ने यी दुईको बिहेले
लिङ्ग ठूलो बनाउँछु भन्दा तीन किलोको लिङ्ग बनेपछि............
जर्मनीका एक पुरुषले आफ्नो लिङ्ग ठुलो बनाउनको लागी लिङ्गमा सिलिकन भर्दा झन् समस्यामा परेका छन् । उनले इन्जेक्सन लगाएर लिङ्गमा सिलिकन भरेका थिए तर इन्जेक्सनका कारणले गर्दा उनको लिङ्गको तौल बढेर तीन किलोको भएको छ ।
४५ वर्षीय मिका
पसल चोरी गर्न गएका चोरले पसल फुटाउन नसकेपछि पसलको मालिकलाई लेखे यस्ताे पत्र
हामीले विभिन्न ब्यवसायीक पसल तथा ब्यक्तिलाई विभिन्न तरिकाले चोरले लुटेको समाचारहरु सुन्दै आएका छौ तर रौतहटका चन्द्रपुर ४ मा भने चोरले पसल फुटाउन नसकेपछि पसलको मालिकलाई पत्र मार्फत माफी नै मागेको छ ।
एक व्यापारीको पसलको सटर फुटाउन नसकेपछि
यति सुन्दर कारमा सबैतिर किन पोतियो गोबर ? कारण थाहा पाउँदा परिन्छ चकित
भारतको अहमदाबादमा यतिबेला अत्याधिक गर्मी छ। मानिसहरु शितलमा बस्छन्। सवारी साधन चलाउन नसकिने गर्मी भएको भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन्। ४५ डिग्री सेल्सियससम्मको गर्मीले कार कुदाइरहँदा निकै गर्मी भएपछि एक महिलाले तापक्रमलाई चिसो बनाउन तथा आफूला
भ्रष्टाचारीलाई मन्दिरमा प्रवेश निषेध
भारतको उत्तर प्रदेशमा रहेको भ्रष्टतन्त्र विनाशक शनि नामक मन्दिरमा भ्रष्टाचारहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ ।
जहा भ्रष्टाचारी मात्र होइन कुनै नेता, मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीहरुलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको जनाएको छ ।&nbs
यहाँ चर्चा गर्न लागिएको भने यसको ठ्याक्कै विपरित घटनाको हो । भारत